Ujeedada Guud ee Gawaarida Korantada ee lagu iibinayo Qiimaha Qiimaha
Ujeedada Guud ee Gawaarida korantada qiimaha ugu wanaagsan
Noocyada Xulashada Mootooyinka Korantada
Ka xulo xulkeena matoorrada korantada. Kusoo hel Gawaarida Yar yar ee Korantada internetka ama ka hel waxyaabo kale oo Sayniska & Waxbarshada ah naga hel.
Alaabada gawaarida korontada
Mashiin koronto la'aan ah oo DC ah oo sidoo kale loo yaqaan mootada korantada ku shaqeysa (ECM ama EC motor) iyo matoorrada iskudhafka ah ee DC. Mashiinka Solenoid waa mishiin ka shaqeeya dhaqdhaqaaqa solenoid. Mashiinka soo-gelinta wajiga 3 waa mid fudud oo adag dhismaha oo leh qodob lagu kalsoonaan karo.
Waxaan ka wada hadli doonnaa noocyada kala duwan ee matoorrada korantada. Qalabka gariirka waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo mashiinka wareegga mashiinka. Dhammaan matoorada inductionku waa matoorro isku mid ah. Xakamaynta xawaaraha elektarooniga ah ama ESC waa wareeg elektaroonik ah oo xakameeya oo xakameeya xawaaraha matoor koronto. Matoorrada gariirka ee wax soo saarka iyo iibinta
Waxaan haynaa cilmi baarisyo iyo kooxo horumarineed oo heer sare ah, mid walbaa leh awoodooda gaarka ah. Waxaan ka mid nahay shirkadaha tirada yar ee Shiinaha ku leh cilmi-baaris madax-bannaan iyo karti horumarineed. Waxaan ka faa'iideysannaa tayada. Iibso matoorrada korantada qiima dhimis leh buuggayaga matoorrada korantada oo dhammaystiran. Qiimaha darawalka gawaarida ee loo yaqaan 'MicroCD darawalka' stepper qiimaha.
Motors Industion Mobilada
Waxaan leenahay sannado badan oo waayo-aragnimo ah soo-saarista mootada oo keliya ayaa ku siinaysa matoor tayo sare leh oo waara. Shirkaddayadu waxay ka soo baxday wax soo saarkeedii ugu horreeyay ee matoorrada korantada illaa hadda, toos u bilaabida korantada wajiga kala-qaadista mashiinka korontada. hal waji & 3 waji indho-indheyn mootada qafis.
Noocyada matoorrada korantada ee iibka ah
Waxaan u qaadaneynaa tayo ahaan faa iidadeena iyo qiimaha ugu hooseeya waa daacadnimo. Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, waad nala soo xiriiri kartaa, waxaan ku faraxsanahay inaan ku caawinno! Adeeggeena macaamiisha waxaa laga heli karaa 24 saac khadka tooska ah. Waxaan nahay Premier EV saaraha motor. Xisaabta korantada korantada ee Siemens waxaa ku jira matoorro-sare iyo kuwa danab hooseeya. Mashiinka DC-ka ee bilaa burushka ah (BLDC) ayaa si aad ah caan ugu noqday qeybaha sida baabuurta. Matoorrada AC ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa warshadaha, ugu horreynna waxaa ugu wacan waxtarkooda sare.
Bixiye caalami ah ee matoorrada korantada
Haddii aad leedahay alaabooyinka aad ugu jeceshahay, Soo iibso matoorrada korantada ugu fiican ee aad u baahan tahay oo kaalay oo nala soo xiriir! Waxaan kaa caawin karnaa sidii aan kuugu hagi lahayn xalka ugu wanaagsan ee baahida ganacsigaaga.